Posted by Tranquillus | Déc 25, 2020 | Shabakada
Waa maxay "ku hadlida Shiinaha" micnaheedu? In kabadan luuqada Shiinaha, waxaa jira Luuqadaha Shiinaha. Qoys ka kooban 200 ilaa 300 oo luqadood, kunaxiran qiyaasaha iyo kala soocida luuqadaha iyo lahjadaha, oo isu keena 1,4 billion oo ku hadla… ama mid ka mid ah shantii qof ee adduunka ku nool!
Nagala soco xuduudaha Boqortooyada Dhexe, dhul ballaaran oo ka kooban beero bariis, buuro, buuro, harooyin, tuulooyin dhaqameed iyo magaalooyin waaweyn oo casri ah. Aynu isla wada ogaanno waxa mideeya (iyo midaynaya) afafka Shiinaha!
Mandarin: mideynta afka
Ku xadgudubka luqadda, waxaan badiyaa isticmaalnaa ereyga Chinese inuu tilmaamo Mandarin. Iyada oo ku dhowaad hal bilyan oo hadla, maahan oo kaliya luuqada Shiinaha ee ugu horeysa laakiin sidoo kale waa luuqada ugu isticmaalka badan aduunka.
Si ka duwan Hindiya, sidoo kale waxay caan ku ahayd luuqado badan, Shiinaha waxay dooratay siyaasad mideynta luqadda qarnigii XNUMXaad. Halka ay luqadaha gobolku ku sii wadaan soo nooleynta wada hadalka ku saabsan qaaradda Hindiya, Mandarin wuxuu isku aasaasay qaran ahaan Shiinaha. Wadanku wuxuu aqoonsan yahay kaliya hal luuqad oo rasmi ah: istaandarka caadiga ah. Waa nooc la habeeyay oo ah Mandarin, lafteeda oo ku saleysan lahjadda Beijing. Standard Mandarin sidoo kale waa ...
Luqadee ayaa looga hadlaa Shiinaha? Hagahayaga luqadaha Shiinaha July 10th, 2021Tranquillus
READ Ganacsi - 7 Maalgashiyo Faa'iido Leh
horeFasaxa lacag bixinta, RTT, CDD: waxa loo shaqeeyahaagu sameyn karo ilaa Juun 30, 2021
socdaBilaash: Sida si otomaatig ah loogu abuuro Shaxan Pivot dhowr ah
1| Waa maxay booqashada shaqo-dhexe?